Nezvedu - Jiangxi Lotte Garments Co, Ltd.
Mushure memakore ekuvandudza, iyo fekitori yakaumba yakaoma kugadzirwa system uye yakaoma solid control system. Zvishoma nezvishoma zvakakwezva kutariswa kwezvakakurumbira zvipfeko zvigadzirwa, senge CLOUD-NINE, DISNEY, JBS Pfeka, KUSANGANISIRA KUSANGANISWA, H&M uye nezvimwe zvakadaro. Rudzi rukuru rwehembe rwevarume vanofukidza juzi dzakarukwa, sweatshirt, T-shirts, Polo, mabhurugwa asina kujairika, Sleepwear, Pajamas, zvipfeko zvekupfeka, nezvimwe
Mumakore achangopfuura, ekushambadzira kwemarudzi epasi rose, LOTTE Garment yakawedzera uye yakasimbisa dhizaini dhizaini. uye yekutengesa dept., Uye yakavamba maviri anozvishandira-wega uye epamusoro-magumo zvigadzirwa senge JONN CABOT uye JEAN CABOT. Izvi hazvingogadzirise kugona uye nhanho yebasa rekugadzirisa, asi zvakare kukurudzira iyo R & D uye kugona kwekutengesa kwefekitori.
Mumakore anouya, zvichibva pamisimboti yekutendeseka manejimendi, mhando yekutanga, inodhura, LOTTE Nguo ichaenda munzira yekuve yepasi rose - kirasi yebasa rebasa.
Kubva pamakore makumi maviri nematatu ezviitiko mu fekitori manejimendi uye kugadzirwa kwembatya, tinogona kubata chero marudzi evarume ekupfeka ekugadzirisa. Zvichakadaro, isu tine yedu dhizaini dhizaini, tinogona kuvezwa zvipfeko zvinoenderana nechikumbiro chemutengi kana kubatsira mutengi mukuvandudza dhizaini yechigadzirwa. Isu tinokupa iwe yakanakisa!